နော်ဝေးလိင်ကွဲစုံတွဲများကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်တင်ခြင်း
comments: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်ယောက်ျား၌လိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများနှင့်မိန်းမကိုယ်တွင်အပျက်သဘောဆောင်သောအမြင်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ညစ်ညမ်းခြင်းကိုမသုံးသောစုံတွဲများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများမရှိခဲ့ပါ။ လေ့လာမှုမှကောက်နုတ်ချက်များ။
အွန်လိုင်းညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်း 36 လူ% နှင့်အမျိုးသမီး 6% အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံထားသည်။ အဆိုပါစုံတွဲ၏ 62% စုစုပေါင်းအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမအတွေ့အကြုံကိုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစုံတွဲ၏ 4% မှာတော့နှစ်ဦးစလုံးအင်တာနက်အပေါ်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြောင်း, အဆိုပါစုံတွဲ၏ 32% အတွက်, လူအင်တာနက်အပေါ်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြောင်း, နှင့်စုံတွဲများ၏ 2% အတွက်ထိုမိန်းမသည်ဤအမှုကိုပြုသောခဲ့သည်။
တဦးတည်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသောရှိရာသူတို့အားစုံတွဲများအတွက်အလိုလိုခေါ်ဆောင်သွားရာသီဥတုရှိခဲ့. တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ဤစုံတွဲကိုပိုမိုအလုပ်မဖြစ်ရှိသည်ဖို့သလိုပဲ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ညစ်ညမ်းကျော်လွှားဒါမှမဟုတ်ပြဿနာရှုထောင့်အဘို့အလျော်ကြေးပေးဤစုံတွဲဆက်ဆံရေးအတွက်အသုံးပြုသည်။ သို့သော်ဆန့်ကျင်ဘက်အဖြစ်ကောင်းစွာစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်; t ကိုဦးထုပ်ညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦးလစ်ဘရယ်ခေါ်ဆောင်သွားရာသီဥတုရှိနေသော်လည်းသူတို့၏ပြဿနာများ၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။
ညစ်ညမ်းမသုံးခဲ့ဘူးသူစုံတွဲများသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအတွင်းလျော့နည်းအလိုလိုခေါ်ဆောင်သွားရာသီဥတုရှိသည်ဖို့တွေ့ရှိခဲ့သည်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များ၏သီအိုရီ ဆက်စပ်. ပိုမိုရိုးရာထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သူတို့ကမည်သည့်အလုပ်မဖြစ်ရှိသည်ဖို့မထင်ခဲ့ပေ။
Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2009 Oct;38(5):746-53. doi: 10.1007/s10508-008-9314-4.
ဒန် K1, Traeen B ကို, Månssonလုပ် SA.
ဒီလေ့လာမှုကလိင်-ဘဝကိုမြှင့်တင်ရန်စုံတွဲဆက်ဆံရေးအတွက်ညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှု 398-22 နှစ်ပေါင်းအသက် 67 လိင်ကွဲစုံတွဲ၏ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးနမူနာပါရှိသည်။ ဒေတာများစုဆောင်းခြင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်စာတိုက်မေးခွန်းကဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါစုံတွဲများ၏အများစု (77%) လိင်-ဘဝကိုမြှင့်တင်ရန်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုမဆိုမျိုးကိုသတင်းပို့ခဲ့ပါဘူး။ အဆိုပါစုံတွဲ၏ 15% မှာတော့နှစ်ဦးစလုံးညစ်ညမ်းအသုံးပွုခဲ့; အဆိုပါစုံတွဲ၏ 3% အတွက်သာအမျိုးသမီးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ညစ်ညမ်းအသုံးပွုခဲ့; နှင့်စုံတွဲများ၏ 5% အတွက်သာအထီးမိတ်ဖက်ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့အညစ်ညမ်းအသုံးပြုသောခဲ့သည်။ တစ်ဦးခွဲခြားဆက်ဆံမှု function ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ရလဒ်များကိုအခြေခံပြီးကစုံတွဲများတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးကိုအသုံးပြုညစ်ညမ်းညစ်ညမ်းမသုံးခဲ့ဘူးသူစုံတွဲများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ဦးထက်ပိုအလိုလိုခေါ်ဆောင်သွားရာသီဥတုခဲ့ဘယ်မှာကြောင်းအကြံပြုသည်။ တစ်ဦးတည်းသာမိတ်ဖက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသောဘယ်မှာစုံတွဲများအတွက်ကျနော်တို့ arousal နှင့်ဆက်စပ်သောပိုပြီးပြဿနာများ (အထီး) နှင့်အနုတ်လက္ခဏာ (အမျိုးသမီး) Self-အမြင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်စုံတွဲများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောသူ Clinician ဘို့အရေးကြီးပုံ၏ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။